Loolan cusub oo ka dhex-qarxay Farmaajo iyo Rooble iyo arrinta hadda la isku hayo | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Loolan cusub oo ka dhex-qarxay Farmaajo iyo Rooble iyo arrinta hadda la...
Loolan cusub oo ka dhex-qarxay Farmaajo iyo Rooble iyo arrinta hadda la isku hayo
Madaxda Soomaalida ayaa dhawaan ku heshiisay in 40 cisho lagu soo afjaro doorashada Golaha Shacabka, hase yeeshee mu mudadaas oo ka billaabata 15-ka bishan kuna eg 25-ka Febraayo ayaa wajaheysa caqabadda loolan cusub oo ka dhex qarxay Farmaajo iyo Rooble.
Sida aad la socotaan waxaa jira isbadal ku dhacay labadii guddi ee hoggaamineysay uguna muhiimsanaa doorashada, waa guddigii maamulka doorashada ee heer Federaal oo iyaga ugu dambeyn xaqiijinayey aqoonsiga xildhibaanka iyo guddiga xalinta khilaafaadka oo isna u taagan inuu kala saaro xubnaha isku heysta Kuraasta ama Kuraasta la isku khilaafa natiijadooda.
Labadaan guddi Maanta malahan wax hoggaan ah, Ra’isulwasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa guddiga xalinta khilaafaadka ka eryey 7 xubnood oo uu ku jiray guddoomiyihii guddigaas illaa Maanta guddigaas ma dooran guddoomiye.
Xubno kamid ah guddiyadaan oo aan la hadalnay waxay sheegayaan inuu jiro loolan xafiisyada sare ah oo la xiriira hoggaanka cusub ee labadaan guddi taasina ay tahay sababta dib usii dhigeysa howsha.
Kooxdan madaxweyne Farmaajo ayaa lumisay labada hoggaan ee labadan guddi ee muhiimka ah, labadii xubnood ee hoggaamineysay guddiyadaan waxaa la fahamsanaa inay labaduba gacan saar dhow la lahaayeen madaxtooyada.
Labadii hoggaan ee horey loo eryey ee guddiyadaan ayaa la aamisan yahay inay sababsadeen Kursigii Yaasiin Farey oo ay soo fasaxeen. Kooxda madaxweyne Farmaajo kursigaas waa u gudbay balse waxaa jira Kuraas badan oo kaas uga muhiimsan oo uu ku jiro midka uu u sharaxan agaasimihii hore ee Hey’adda NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir kaas oo la eegayo sida ay guddiyadaan u wajahaan.
Previous articleGuterres: Malaayiin reer Afghanistan waxa ay qarka u saaran yihiin in cunno la’aan u dhintaan!
Next articleAbaabulka Banaanbax ka dhan ah Mahadi Guuleed oo ka socda Muqdisho.